Ciidamada dowladda oo nin watay gaari laga shakiyay ku toogtay agagaarka Xalane
Home » Wararka » Ciidamada dowladda oo nin watay gaari laga shakiyay ku toogtay agagaarka Xalane
Ciidamada Ammaanka ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saaka degmada Wadajir ku toogtay, nin darawal ahaa oo watay gaari kuwa dadweynaha ay raacaan ee loo yaqaano BL-ka, kaasoo ay uga shakiyeen inuu waxyaabaha qarxa sida.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada ammaanka ay ku amreen ninka waday gaariga inuu istaago, kaasoo gaariga si xowli ah ku waday, waxaana ay ku toogteen meel ku dhow halka lagu magacaabo Madiina Gate oo ku dhow Xerada Xalane.
Markii uu falkaas dhacay kaddib ayay ciidamada ammaanka u yeereen Ciidanka AMISOM qeybta Miino Baarista, waxaana baaritaan ay ku sameeyeen ninka iyo gaariga lagu ogaaday in aanu waxyaabaha qarxa saarneyn gaariga.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ninka darawalka ee ay toogteen ciidamada ee watay gaariga BL-ka uu ka soo cararay Ciidamada qaada kuwa canshuurta, sidaasna gaariga uu si xowli ah ugu soo kaxeeyay, taasna ay sababtay in ciidamada ka shakiyaan, dabadeedna ay toogtaan.
Ehelada ninka la toogtay ayaa la sheegay in meydkiisa ay ka qaateen goobta, iyadoo aan wax hadal ah ama cudur daar loo sheegin, waxaana dhacdadan si aad ah looga hadal hayaa degmada Wadajir.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka caadi ah in si fudud lagu dilo, hadii aad gaari wadato, waxaana dhowr jeer waddooyinka Muqdisho lagu dilay dad watay gaadiid oo ay ciidamada ka shakiyeen, halka kuwana loo dilay wadada ii baneey ama ha igu soo dhowaan.
Nabadoon caan ah oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo
Shirka gollaha guud ee Qaramada Midoobey oo maanta furmaya